ဒေါက်တာ ဗိုက်ကလေး www.drbikalay.com ဗျင်းတော့မယ် နှင်းရယ်...(18+)
တတိယနှစ် နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူလေး ခင်နှင်းဦး အထက်တန်းကျောင်းသူဘဝက ကြိုက်သူတွေ လိုက်သူတွေရှိခဲ့ပေမယ့်….သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း စိတ်ဝင်စားသလိုရှိခဲ့ပေမယ့်….ပညာရေးကို ဦးစားပေး၍ အချစ်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့ သည်။ တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ရောက်တော့ အလှတွေပိုမိုကြွယ်ဝပြည့်စုံလာသော ခင်နှင်းဦးအား ကြိုက်သူတွေ လိုက်သူတွေ ပိုများလာသည်။ ဒီထဲကမှ သူမစိတ်ကြိုက်တစ်ယောက်ကို စိတ်တိုင်းကျရွေးချယ်ခဲ့သည်။
သူ့နာမည်က စိုးသီဟ တဲ့….အရပ် မြင့်မြင့်နှင့် အားကစားသမားတစ်ယောက် ကိုယ်လုံးမျိုး….။ ခင်နှင်းဦးနှင့် တစ်တန်းတည်း ပထမနှစ်ကျောင်းသားတစ် ယောက်ပင်ဖြစ်သည်။ ခင်နှင်းဦး….စိုးသီဟနှင့် တွဲခဲ့တာ ပထမနှစ်မှသည် အခုတတိယနှစ်နောက်ဆုံးရောက်သည်ထိပင်ဖြစ် သည်။ စိုးသီဟက ခင်နှင်းဦးအား အတော်ချစ်သည်။ ခင်နှင်းဦး မကြိုက်တာဘာမျှမလုပ်။ ခင်နှင်းဦး သဘောမတူလျှင် နောက်ဆု
တ်သည်။ သူမတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူဘဝမှာ သုံးနှစ်မြောက်သည်ထိ သန့်သန့်စင်စင်ရှိနေခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ တော့ ခင်နှင်းဦး၏ ဘဝတစ်သက်တာတွင် ရင်အခုန်ရဆုံးနေ့ရက် တစ်ရက်အဖြစ် ဆုံဆည်းတွေ့ကြုံခဲ့ရလေသည်။ ကျောင်း ပိတ်ထားတာ တစ်ပတ်ခန့်ရှိပြီမို့ ခင်နှင်းဦး ချစ်သူကို လွမ်းနေမိသည်။ ဖုန်းနှင့်အဆက်အသွယ်ရသော်လည်း လူချင်းကမတွေ့ ရ။ ခင်နှင်းဦး အပြင်ထွက်ဖို့သိပ်မလွယ်။
ဖုန်းကလည်း အိမ်မှာမရှိ၍ လမ်းထိပ်သို့ ထွက် ထွက်ဆက်ရသည်။ ခဏ ခဏ ထွက် ဖို့ကလည်း မလွယ်ပေ။ ဒီနေ့လူကြီးတွေ အပြင်သွားနေတုန်း ဖုန်းထွက်ပြောရန် ကြံစည်နေခိုက်….စိုးသီဟ တစ်ယောက် သူမ ၏ အိမ်သို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်၍လာသည်။ တစ်ခါဖူးမှ မလာဖူးသည်မို့ အံ့သြမိသည်။ အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိခိုက်မို့ ထိတ်လည်း ထိတ်လန့်မိသည်။ တွေ့တွေ့ချင်း အံ့အားသင့်နေပြီးမှ… “ လာ လာ….စိုး…ထိုင်….ဘယ်ကလှည့်လာတာလဲ….မလာစဘူး….” ပြောလည်းပြော ခင်နှင်းဦးက စိုးသီဟ၏ လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲ၍ အိမ်ရှေ့ရှိဆက်တီကုလားထိုင်တွင် ထိုင်ခိုင်း သည်။ ပြီးတော့….သူမကလည်း စိုးသီဟ ဘေးတွင်ဝင်၍ထိုင်သည်။ မတွေ့တာကြာလို့ လွမ်းနေသူမို့ ချစ်သူရင်ခွင်ထဲ ပြေးဝင် ချင်တာအမှန်ပင်။ “ ကိုစိုး…မနက်ထဲက လမ်းထိပ်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာရောက်နေတာ…စောစောကလူကြီးတွေ ထွက်သွားတာ တွေ့လို့လာတာ….” ပြောလည်းပြော စိုးသီဟက လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သိုင်းဖက်ပြီးနမ်းသည်။ နမ်းရုံမျှမက စိုးသီဟ၏လက်က ခင်နှင်းဦး ၏ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ရောက်လာကာ ဆုတ်ညှစ်လိုက်သည်။
ရင်သားပေါ်မှလက်ကို သူမ၏လက်ကလေးနှစ်ဖက်ဖြင့် ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖယ်ရှားပစ်သည်။
“ အို….ချစ်တာကလဲ ကိုစိုးရယ်….
ပြောကာမှပင် စိုးသီဟကပို၍တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားပြီး ကျန်လက်တစ်ဖက်က ရင်သားပေါ်ရောက်လာပြီး အင်္ကျီလေးပေါ်မှပင် ဆုတ်ချေနေပြန်ပါသည်။ လုံးကျစ်သောရင်သားအစုံ၏ အတွေ့က ဘရာစီယာနှင့် အပေါ်မှ ဝတ်ထားသော အင်္ကျီလေးကြားကခံနေလင့်ကစား အတွေ့ထူး၍ စီးပိုင်တင်းမာ နုညက်လှသည်။ ခင်နှင်းဦး၏ လက်ကလေးနှစ်ဖက်က စိုးသီဟ၏ လက်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ရုံမျှပင်မကဘဲ သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကိုပါ ရုန်းကန်၍ထွက်ရင်း ကျောပေးလိုက်သလိုဖြစ် သွားသည်။ မြဲမြံသန်မာလှသော စိုးသီဟ၏လက်နှစ်ဖက်အကြားမှ ခင်နှင်းဦးတစ်ယောက်ရုန်းမထွက်နိုင်ဖြစ်နေရရှာသည်။ ဒီ နေ့မှဘဲ ခင်နှင်းဦး ဘရာစီယာအပျော့စားကို ဝတ်ထားမိသည်။ ဒီတော့ သူမ၏ရင်သားတွေကို ဆုတ်နယ်နေသော အတွေ့ကို ရင်သားတွေက ထိထိမိမိခံစားနေရသည်။ နို့နှစ်လုံးကိုအင်္ကျီပေါ်မှ ဆုတ်နယ်ပေးရုံမျှမကဘဲ စိုးသီဟက သူမ၏ဂုတ်ပိုးသား လေးများနှင့် လည်တိုင်အရင်းရှိ ဖွေးဖွေးဥဥအသားလေးတွေကိုပါ သူ၏ပူနွေးသော နှုတ်ခမ်းနှင့်စုပ်လိုက် လျှာဖျားလေးနှင့်တို့ ကာ ထိကာဖြင့် ယက်လိုက်လုပ်ပေးနေပြန်ရာ ခင်နှင်းဦးတစ်ယောက် တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်၍လာရသည်။
“ လွှတ်ပါ….ကိုစိုးရယ်…..နှင်းကိုချစ်ရင် လွှတ်ပါတော့….” ပြောလည်းပြော ခင်နှင်းဦးက အတင်းရုန်း၍ထရပ်လိုက်သည်။ စိုးသီဟကလည်း သူမကို ဖက်ထားတာကို မလွှတ်ဘဲ သူကပါထ၍မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ “ ချစ်လို့ပဲနှင်းရယ်….နောက်ပြီး ကျောင်းပြီးရင်ပဲ လက်ထပ်ကြတော့မှာပဲကွာ….” “ အို…လက်ထပ်မှ လက်ထပ်ပေါ့….ခုလိုတော့ မလုပ်နဲ့ကွာ….” ရုန်းရင်းကန်ရင်းဖြင့်ပင် ခင်နှင်းဦးသည် သူမ၏ တင်သားကြီးတွေကို နောက်ဖက်မှထိုးထောက်မိထားသော အရာကြီးကို သတိထားလိုက်မိစဉ်မှာပင် သူမ၏ရင်ထဲတွင် ဖျင်းကနဲ တင်းသွားပြီး တစ်ကိုယ်လုံးတုန်သွားကာ ရုန်းကန်နေ သော သူမ၏အင်အားများ ရုတ်ချည်းဆိုသလို ယုတ်လျော့၍ နုံးချိသွားရသည်။ ဒါကို သတိထားမိလိုက်သော စိုးသီဟက ဗြုံးကနဲ ကြမ်းပြင်ပေါ်ထိုင်ချလိုက်ရင်း ခင်နှင်းဦး၏ကိုယ်လုံးလေးကိုပါဆွဲ၍ သူ၏ရင်ခွင်ထဲသို့ လှန်ချလိုက်သည်။ “ ကို….ကိုစိုး….မလုပ်….” စိုးသီဟ၏ ပူနွေးသော နှုတ်ခမ်းကြီးများက သူမ၏တဆတ်ဆတ်တုန်နေသော နှုတ်ခမ်းလေးများကိုဖိ၍ စုပ်နမ်း လိုက်ပါတော့သည်။ မရုန်းကန်တော့ပါ….။ ခင်နှင်းဦးတစ်ယောက် ရုန်းကန်နိုင်စွမ်းတွေ ပျောက်ကွယ်သွားရသည့်အပြင် မျက် တောင်ကော့ကြီးတွေကလည်း စင်း၍ကျနေပြီ။ သူ့နှုတ်ခမ်းကြီးတွေကြားမှာ စုပ်နမ်းထားသည့် ခင်နှင်းဦး၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို စိုးသီဟ၏ လျှာဖျားက မထိတထိပွတ်သပ်၍ ယက်ပေးရင်း ပျော့ခွေကျလာပြီဖြစ်သော ခင်နှင်းဦး၏ ကိုယ်လုံးလေးကို လက်တစ်ဖက်ကထိန်း၍ ပွေ့ဖက်ထားရာမှ စိုးသီဟ၏ ကျန်လက်တစ်ဖက်က ထောင်လျက်သားဖြစ်နေသော ခင်နှင်းဦး၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ကြားရောက်သွားပြီး ထဘီပေါ်မှပင် စောက်ဖုတ်လေးကိုအုပ်၍ ကိုင်လိုက်သည်။ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားသော ခင်နှင်းဦးတစ်ယောက် စိုးသီဟ၏ လက်ကြီးကို ဆွဲ၍ဖယ်ရှားသေးသည်။ စိုးသီဟ၏လက်ကြီးက ဖယ်ရှား၍မသွားသည့်အပြင် သူမ၏ စောက်ဖုတ်အိအိကြီးကိုပင် ပို၍ဆုတ်လိုက်သဖြင့် သူမသည်ပင်ယောင်ယမ်း၍ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားပေးလိုက်မိ သည်။ ပြီးတော့ စောက်ဖုတ်အိအိကြီးကို ဆုတ်နယ်ပေးရုံမျှမက လက်ဖဝါးဖြင့်လျောတိုက်ပွတ်ပေးသည်။ ဒီမှာတင် ခင်နှင်းဦး တစ်ယောက် အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ်၍မထားကြောင်း စိုးသီဟ သိလိုက်သည်။
သူ၏လက်ဖဝါးအောက်မှ သိသိသာသာပင် ဖောင်းမို့၍တက်လာသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီး နှစ်ခုစပ်ကြားသို့ လက်ညှိုးထိပ်ကိုဖိထောက်ကာ အကွဲကြောင်းတစ် လျှောက် ဖိထောက်၍ ပွတ်ပေးသည်။ စိုးသီဟ၏ နှုတ်ခမ်းများက ခင်နှင်းဦး၏ နှုတ်ခမ်းများကို လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ခင်နှင်းဦး၏ မှေးစင်းနေသောမျက်လုံးများက မနည်းအားယူ၍ ပွင့်လာသည်။ “ ကိုစိုးရယ်….ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကွာ….” ခင်နှင်းဦး အသက်ကိုပင်ဝအောင်မရှုရသေး….စိုးသီဟ၏ နှုတ်ခမ်းက သူမ၏လည်တိုင်လေးကို ဖိကပ်ကာနမ်းစုပ် ပြန်သည်။ ခင်နှင်းဦး၏ စောက်ပတ်ကြီးအပေါ်မှ စိုးသီဟ၏ လက်ကလည်း အငြိမ်မနေ ပွတ်မြဲပွတ်ပေးနေသည်။ သူမဝတ် ထားသော ထဘီလေးအောက် စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုကြားမှ စိမ့်ထွက်လာသောအရည်လေးများက ထဘီလေးကို ဖောက်ထွက်လာကာ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်ဖိထောက်၍ ပွတ်ပေးနေသော လက်ညှိုးထိပ်လေးကို စိုစွတ်စွာ ထိတွေ့လာပါတော့သည်။ ခင်နှင်းဦး၏ တစ်ကိုယ်လုံးပျော့ခွေ၍ နေချေပြီ။ စိုးသီဟက ခင်နှင်းဦး စောက်ဖုတ်ပေါ်ရှိ လှုပ်ရှား နေသော သူ၏လက်ကိုရပ်လိုက်ပြီး စောက်ဖုတ်အိအိကြီးကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်၍ အုပ်ကိုင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ စိုးသီဟ၏ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ခါးကိုဖက်လိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်ကလည်း စောက်ဖုတ်အိအိကြီးကို အုပ်၍ ဆုပ်ကိုင်ထားလျှက်က ….ခင်နှင်းဦးအားဆွဲ၍ မတ်တပ်ရပ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ခါးကိုဖက် လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ စောက်ဖုတ်လေးကို အုပ်ကိုင်ပြီး ခင်နှင်းဦးကို ဆွဲခေါ်လာခဲ့သည်။ ရှက်ရွံ့ထူပူစွာဖြင့် ခင်နှင်းဦးက သူမ၏မျက်နှာလေးအား စိုးသီဟ၏ရင်ခွင်တွင်အပ်၍ လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ လမ်းလျှောက်နေသော သူမ၏ပေါင်လေးတွေက ကွတတလေးဖြစ်နေသည်။ အိမ်အတွင်းပိုင်းသို့ လှမ်းဝင်လိုက်ပြီးတွေ့မြင်လိုက်ရသည့် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော အိပ်ယာလေးရှိနေသည့် အခန်းထဲသို့ ဝင်ခဲ့ သည်။ ခင်နှင်းဦးသည် ယခုအချိန်တွင် ရုန်းကန်၍ ထွက်ပြေးလိုပါက ထွက်ပြေးနိုင်သော အနေအထားဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် ပြေးနိုင်စွမ်းမရှိ။ သူမတစ်ကိုယ်လုံး နုံးချိ၍ နေမထိထိုင်မသာဖြစ်နေသည်။ စောက်ပတ်အိအိကြီးကိုအုပ်၍ ဆုပ်ထား သော စိုးသီဟ၏လက်က စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက်အား လက်စောင်းဖြင့်တိုက်၍ ဖြေးဖြေးချင်းပွတ်လိုက်သည်။ သူမ၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို ကားပေးလိုက်မိသည်။ ခင်နှင်းဦး၏ စောက်ပတ်ကြီး အဆမတန်ဖောင်းကား၍ တင်းမာနေကာ စောက်ပတ်ထဲမှ ယားကနဲ ယားကနဲ ခံစားလိုက်ရသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးခံစားနေရသော ရမ္မက်များကြားက သူမရုန်းမထွက်နိုင် ဖြစ်နေသည်။ သူမခေါင်းထဲတွင် သိနေသော အသိကလည်း သူမ၏ရှေ့တွင် တွေ့နေရသော အိပ်ယာထက်၌ မကြာတော့ သည့်အချိန်လေးအတွင်းတွင် သူမတစ်သက်လုံးအရိပ်တစ်ကြည့်ကြည့်ဖြင့် သန့်စင်ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ရသော အပျိုရည်လေးကို ပေးဆပ်ရပေတော့မည်။ အသိဉာဏ်နှင့် ရမ္မက်ဆန္ဒနှစ်ခုကြားတွင် လွန်ဆွဲလျှက် ခင်နှင်းဦး၏ မျက်ဝန်းများမှ မျက်ရည်များ တလိမ့်လိမ့်ဆင်းလာခဲ့သည်။ မျက်ရည်များဖြင့် ခင်နှင်းဦး၏ မျက်နှာလေးသည် ရုတ်တရက် တင်းမာသွားသည်။ ပြီးတော့…. အံတစ်ချက် ကြိတ်လိုက်ပြီး….အိပ်ယာလေးရှိရာ ကုတင်ဆီသို့ ခြေလှမ်းလိုက်သည်။ ကုတင်ဘေးသို့ရောက်လျှင် ခင်နှင်းဦး သည် ကုတင်စောင်းတွင် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကို မတင်ကာ အိပ်ယာလေးထက်ပက်လက်လှန်ချကာ မျက်လုံး အစုံကို မှိတ်ထားလိုက်လေသည်။ သူမနှင့်အတူ ကုတင်ပေါ်သို့ တစ်ပါတည်းပါလာသော စိုးသီဟက ခင်နှင်းဦး၏ ကိုယ်လုံး လေးကို ဖက်လိုက်ပြီး မျက်နှာလေးအနှံ့ကို တစ်ဖွဖွနမ်းနေသည်။ စိုးသီဟ၏ လက်တွေက အငြိမ်မနေဘဲ သူမ၏ကိုယ်လုံးပေါ် တွင် လှုပ်ရှားပြေးလွှားရင်း ခင်နှင်းဦး၏ အင်္ကျီလေးကို ချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ဘရာစီယာကို ချွတ်ရင်း ဘရာစီယာအ တွင်းမှပြည့်အစ်၍ထွက်နေသော ခင်နှင်းဦး၏ ရင်သားစိုင် နုနုဖွေးဖွေးညက်ညက်လေးများကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် ဒရစပ်နမ်းသည်။ သူမ၏ ရင်သားမှ ဘရာစီယာကို ခွာလိုက်ပြီးပြန်တော့ နို့သီးသေးသေးလေးတစ်ဖက်ကို ငုံ့၍စို့လိုက်ရာ ဟင့်ကနဲ တစ်ချက်အ သံလေးထွက်၍ ခင်နှင်းဦး၏ ကျောလေးကော့တက်လာသည်။ ပြီးတော့ နို့လေးနှစ်ခုကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်စို့သည်။ စိုးသီဟ၏ လက်တစ်ဖက်က ခင်နှင်းဦး၏ ဖောင်းကားတင်းပြောင်၍နေသော တစ်လုံးတစ်ခဲဖင်သားကြီးများပေါ် ရောက်၍သွားပြီး ဖင်သားကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်သည်။ ပြီးတော့…ပေါင်တံကြီးတွေပေါ်ရောက်သွားပြီး ထက်အောက်စုံဆန် ပွတ်ပေးနေပြန်သည်။ တခဏအတွင်း လိမ်ထားသော သူမ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက ကင်းကွာ၍သွားသည်။ စိုးသီဟ နို့လေးတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ခါးလေးကိုမကာ တစ်ဖက်က ခင်နှင်းဦး၏ ထဘီလေးကို ဆွဲ၍ ချွတ်လိုက်သည်။ အစကတည်းက ပြေလျော့နေသော ခင်နှင်းဦး၏ ထဘီလေးမှာ အလွယ်တကူ ကျွတ်ထွက်သွားချိန်တွင် တော့ ဖွေးကနဲ ပေါ်လာသော သူမအောက်ပိုင်းကို တပ်မက်စွာကြည့်ရင်း….သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်လိုက် သည်။ ခင်နှင်းဦး မျက်လုံးလေးမှိတ်၍ မျက်နှာလေးလွှဲထားသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး ဝတ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားကြပြီ….။
စိုးသီဟက ခင်နှင်းဦး၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ဆွဲ၍ထောင်လိုက်ပြီး ဒူးထောက်၍ဝင်လိုက်သည်။ ခင်နှင်းဦး၏ ဖြူဖွေး၍အိနေ သော စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ အမွှေးလေးတွေ သန့်စင်ထားပုံရသည်။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခုမှာ ဖောင်းတင်း၍နေပြီး နှုတ်ခမ်းသားကြီးနှစ်ခုကြားရှိ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတွင် စောက်ရည်ကြည်လေး များမှာ စိုစိမ့်၍ထွက်နေကြသည်။ ထောင်မတ်နေသော လီးကြီးထိပ်မှ ပြောင်တင်းနေသော ထိပ်ဖူးကြီးကို အရည်ကြည်လေးတွေ စို့ထွက်နေသည့် စောက်ပတ်ဝလေး တွင် ထောက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ…လီးတန်ကြီးအရင်းကို လက်ဖြင့်ကိုင်၍ ခင်နှင်းဦး၏ စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းတစ် လျှောက်ကို စုန်ဆန်ပွတ်ပေးရာ ပထမ ခင်နှင်းဦး၏ ခါးလေး ကော့၍ ကော့၍ တက်လာသည်။ လီးထိပ်က ထောင်တက်နေ သော စောက်စေ့လေးကို ခလုတ်တိုက်နေသည်။ ခင်နှင်းဦး မခံစားနိုင်….ခဏကြာတော့ ခင်နှင်းဦး၏ ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးများ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်၍ လာတော့သည်။ စောက်ပတ်ဝမှ ထွက်လာသော စောက်ရည်တွေကလည်း ဒလကြမ်းပင်ဖြစ်သည်။ စိုးသီဟ၏ လီးတန်ကြီး တဆတ်ဆတ်တုန်ယင်၍လာသည်။ စိုးသီဟ အသက်ကိုတစ်ဝကြီး ရှုသွင်းလိုက်ပြီးနောက် လီးထိပ် ကို စောက်ပတ်ဝသို့တေ့ပြီး တဆက်တည်း လိုးသွင်းလိုက်ပါတော့သည်။
ခင်နှင်းဦး မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့သွားပြီး ရင်လေးရော ခါလေးပါ ကော့တက်သွားသည်။ လီးတစ်ဆုံးဝင်သွားသည်နှင့် စိုးသီဟက လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် သူမ၏ရင်သားတွေကို လှမ်းဆုပ်သည်။ ဖျစ်ညှစ်ပေးသည်။ နို့သီးလေးတွေကို ချေမွပေးသည်။ ခင်နှင်းဦး၏ ရှုံ့မဲ့နေသော မျက်နှာလေး တဖြေးဖြေးပြေလျော့လာသည်။ ထိုသို့ လုပ်ပေးနေရင်း ခင်နှင်းဦး၏ စောက်ခေါင်းထဲ သို့ တစ်ဆုံးဝင်နေသော သူ၏လီးတန်ကြီးကို နှဲ့ပေးပြန်သည်။
ခင်နှင်းဦး၏ ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးများ ကော့ကနဲ ကော့ကနဲ တက်၍လာသည်။ စိုးသီဟက သူ၏လီးတန်ကြီးကို လက်သုံးလုံးသာသာလောက် ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
“ အ…အ….အင်း….” ပြီးတော့….လီးတန်ကြီးကို ခင်နှင်းဦး၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ဆောင့်ကာပြန်သွင်းသည်။
“ ပြွတ်….ဖွတ်….” “ အင့်….ဟင့်….” ခင်နှင်းဦး၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးဖြူဖြူလေးမှာ ရှေ့တိုးနောက်ငင် တစ်ချက်ဖြစ်ကာ တုန်တက်သွားသည်။ စိုးသီဟသည် လီးကို လက်လေးလုံးခန့်သာ ဆွဲဆွဲထုတ်ပြီး လေးလေးနှင့်မှန်မှန် ဆောင့်၍လိုးပေးသည်။ တစ်ခါ တစ်ခါ လီးတန်ကြီးအရင်းကို အောက်သို့ နည်းနည်းနှိမ့်၍ ညင်ညင်သာသာလေးဆောင့်၍ အလိုးလိုက်တွင်တော့….။
“ အင့်….ဟင့်….ကျွတ်….ကျွတ်….” သူမ၏တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားပြီး ရင်ထဲတွင် ကျင်၍တက်သွားသည်။ ပြီးတော့ ခံစားရခက်စွာဖြင့် အယောင် ယောင်အမှားမှားဖြစ်ကာ စောက်ခေါင်းထဲမှ လီးကို စောက်ပတ်အတွင်းသားလေးများက ဆွဲ၍ညှစ်လိုက်သည်။ စိုးသီဟက လည်း ခင်နှင်းဦး၏ တုံ့ပြန်မှုမှာ အရသာထူးလှသည်ဖြစ်၍ လီးတန်ကြီးကို ဒစ်ကြီးနားအထိ ဆွဲ၍ဆွဲ၍ထုတ်ကာ ဆောင့်ပါလေ တော့သည်။
ရင်ထဲတွင် မွန်းကြပ်ပြည့်သိပ်၍လာကာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာသောကြောင့် ခင်နှင်းဦးမှာ အသံထွက်၍ ညီးညူမိ လိုက်သည်။ အရသာတွေအီဆိမ့်တက်လာသော စိုးသီဟက သူ၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ခင်နှင်းဦး၏ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်သို့ မှောက် ၍ချကာ တင်းကြပ်စွာပွေ့ဖက်၍ ဖင်ကြွကာ ဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်။
မကြာမီမှာပင် နှစ်ယောက်စလုံး တဟင်းဟင်းဖြစ်၍လာပြီး တုန်တုန်ယင်ယင်ဖြစ်၍ လာရသည်။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး လည်း အားမရနိုင်ဖြစ်၍လာရသည်။ စိုးသီဟ၏လက်က သူမ၏ချိုင်းအောက်မှနေ၍ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီလျှိုသွင်းလိုက်ပြီး ပုခုံးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်၍ဆွဲကာ အားကုန်ဆောင့်၍လိုးတော့ရာ တစ်ခဏ အတွင်းမှာပင်….
“ အား….အမလေး…အင့်….အ…အမလေး….လေး….” ဟူသော အသံလေးများဖြင့် စိုးသီဟ၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို တင်းကြပ်စွာဖက်၍ထားသော ခင်နှင်းဦး၏ လက်လေးနှစ် ဖက်က စိုးသီဟ၏ ကျောပြင်ကြီးကို စိတ်ရှိလက်ရှိထုရိုက်ကာ တစ်ကိုယ်လုံးတွန့်လိမ်သွားစဉ်မှာပင် စိုးသီဟမှာလည်း ‘အင်း’ ကနဲ တစ်ချက်ညီး၍ လီးကိုအတင်းထိုးစိုက်ဖိကပ်ကာ….သူ၏ ခါးကြီး တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ တက်သွားရပါတော့သည်။